हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु प्रकरण ःएसपीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन « Pen Nepal
हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु प्रकरण ःएसपीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन
Published On : 12 September, 2020 1:52 pm By : पेननेपाल
काठमाडौँ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको हिरासतमा रोशन विकको मृत्यु भएको घटना छानविन गर्न समिति गठन गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजीव बस्नेतको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी मुकेश कुमार सिंहले
धनगढी उपमहानगरपालिका–५ का रोशनलाई भदौ २२ मा चोरी मुद्दामा पक्रेर प्रहरीले थुनामा राखेको थियो । शुक्रवार विहान हिरासतको शौचालयमा झुण्डिएर उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले दावी गरेको छ ।
आफन्तले हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए । छानविन समितिमा एसपी बस्नेतसहित चारजना छन् ।
प्रहरीले सर्टको पासोमा झुण्डेर आत्महत्या गरेको भनेपनि मृतकका आफन्तले उनको शरीरमा चोटपटक देखिएको हुनाले कुटपिटबाट मृत्यु भएको दावी गरेका छन् ।
प्रहरीले छानबिन समिति गठन गरेपछि शुक्रबार साँझ नै पोस्टमार्टमपछि परिवारले शव बुझेका छन् । मृतकका बुवाले ‘घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पाऊँ’ भन्दै जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी प्रतीक विष्टले बताए ।
चौतारोमा बसेर अध्यक्ष चयन गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले खत्तम पार्यो ः प्रधानमन्त्री
देउखुरी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले सरकारले पार्टीका केही नेताहरुले चौतारोमा बसेर अध्यक्षमा चयन गरेको
निर्वाचन आयोगको निर्णय ः राजनीतिक दलसम्वन्धि ऐनको दफा ३३ बमोजिम ! के छ दफा ३३ मा ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुले चाहेर पनि तत्काल पार्टी विभाजनको मान्यता नपाउने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुबै समूहले गरेको छुट्टाछुट्टै निर्णयलाई
ओलीलाई साधारण सदस्यसमेतबाट निश्कासन गर्यो प्रचण्ड–माधव पक्षले
काठमाडौं । प्रचण्ड–माधव पक्षले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी पार्टीबाट निश्कासन गरेको
प्रधानमन्त्री ओली दाङ जाँदै, राप्ती पुल उदघाटन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जाँदै
काठमाडौं । सबै सरकारी सेवालाई मोबाइल एपबाटै उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले माघ २ मा सार्वजनिक